DAAWO:“Baarlamaanka oo kaliya ayaa xilka iga qaadi kara” | Wardoon
Home Somali News DAAWO:“Baarlamaanka oo kaliya ayaa xilka iga qaadi kara”
DAAWO:“Baarlamaanka oo kaliya ayaa xilka iga qaadi kara”
Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada Sayid Cali Sheekh ayaa ku tilmaamay qalad xil ka qaadis ay ku sameeyeen guddiga doorashooyinka Qaranka.
Shir jaraa’id oo uu maanta ugaga hadlay xilka qaadista lagu sameeyay ayuu ku tilmaamay mid qalad ah oo hannaanka loo maray xilka qaadistiisa ay tahay sharci darro.
“Xubnaha guddiga waxa ansixiyay oo u codeeyay baarlamaanka xubin kasta si la mid ah doorashada Madaxweynaha Federalka Soomaaliya,ayna sidoo kale Golaha Wasiirada ay ansixiyeen.”ayuu yiri Sayid Cali Sheekh oo ahaa guddoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashada Qaran.
Sayid Cali Sheekh ayaa shirka jaraa’id ku sheegay in aysan xilka ka qaadi karin Guddiga Doorashada isagoo xusay in guddiga ay xubno ka yihiin sagaal xubnood.
“Waxaan diyaar u ahay in aan hortago baarlamaanka isla markaana aan ka hor cadeeyo in guddiga doorashada uu yahay mid ay qaladaad badan ka dhex jiraan ayna hay’adaha caalamiga ah sida USAID ka warqabaan.”ayuu yiri Sayid Cali oo xubno ka mid ah guddiga doorashadu ku sheegay inay xilka ka qaadeen.
Waxa uu xusay Sayid Cali in dhawaanahaanba guddiga doorashooyinka uu ka dhex jiray khilaaf xarga goostay, ayna gudoomiyaha guddiga ay u horseeday guddigaasi fashil iyo ceeb.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada ayaa sheegay in guddiga dhexdiisa ay ka jirto kaligii talisnimo,musuqmaasuq iyo nin jecleysi.
Khilaafka ka soo if baxay Guddiga Doorashada Qaran ayaa dhabarjab waxa ay u keeni kartaa hannaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod oo la qorsheeyay in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo.
Previous articleDHAGEYSO: Dowladda waxay latimid dhaqan cusub
Next articleProf Yaxye Sh.Caamir”Bankiga dhexe guddoomiye kama noqonkaro qof ajnabi ah
Baro taariikhda Agaasimaha cusub ee Madaxtooyadda Somaliya